तपाइँको आवश्यकता र शैली अनुरूप कार्य वातावरणको लागि कार्यालय कुर्सीहरू सजाउनुहोस्
तपाइँको अनुरूप कार्य वातावरणको लागि कार्यालय कुर्सीहरू
सुसाना Godoy | | कार्यालयहरू
जब हामी चाहन्छौं हामी के हेर्छौं केहि अफिसको कुर्सी किन्नुहोस्? निस्सन्देह, आराम र शैली दुई मौलिक विचारहरू हुन्। पहिलो किनभने हामीले ध्यानमा राख्यौं कि यो केही आवश्यक कुरा हो, दुबै काम गर्नेहरूका लागि र आगन्तुकहरू प्राप्त गर्नका लागि। जबकि दोस्रो, हामी र हाम्रो कामको वातावरणको बारेमा दुबै कुरा गर्छ। हामी सबै जो घण्टा काम गरेर बसेर काम गर्दछौं, हामी राम्रो अफिस कुर्साहरूको महत्त्व जान्दछौं। कुर्सिहरू जुन हामीलाई चाहिने सबै अपेक्षाहरू पूरा गर्दछ: माथि उल्लिखित सान्त्वनादेखि कुंडा वा एर्गोनोमिकहरूसम्म जुन हाम्रो कामलाई अलि सजिलो बनाउँदछ र हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल राख्छ। पत्ता लगाउनुहोस् कुर्सिहरु को प्रकारहरु र सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू सक्षम हुन तपाइँको कार्यस्थल सजाउनुहोस्!
1 अफिस कुर्सिको प्रकार
1.1 कार्यालय आर्मचेयरहरू
1.2 डेस्क कुर्सि
1.3 आत्मविश्वास शैली कुर्सि
1.4 बहुउद्देशीय कोठाको लागि कुर्सी
2 अत्यावश्यक कार्यालय फर्नीचर
2.1 डेस्क वा कार्य तालिका
2.2 फाइल तखता वा दराजहरू
अफिस कुर्सिको प्रकार
भित्र भित्र कार्यालय कुर्सि, हामी फरक नाम छुट्याउँछौं: आर्मचेयरहरू। कुनै श doubt्का बिना, तिनीहरू एक टेबल पछाडि वा कार्यालयमा घण्टा र घण्टा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि उत्तम हुन्छ। पूर्व आर्मचेयरको प्रकार तिनीहरूले हामीलाई आवश्यक सान्त्वना प्रदान गर्नेछन् ताकि हाम्रो पछाडि पीडा नहोस्। किनकि त्यहाँ काठ र ग्रीवा दुबै क्षेत्रहरूमा समस्याहरूको एक उच्च संख्या हो, किनकि यदि हामी सही आसनमा छैनौं भने हाम्रो शरीरले पीडित छ। त्यसोभए, हामीले एक आवश्यक छनौट गर्नु पर्छ जुन हाम्रो आवश्यकता अनुसार मिल्छ। हामी उनीहरूको आर्मट्रेसमा विभिन्न फिनिशका साथै उनीहरूको एर्गोनोमिक आकार र समायोज्य सीटमा फेला पार्दछौं। उदाहरण को लागी, यो Montiel Office बाट हो जुनसँग उपलब्ध उत्पादनहरूको धेरै विस्तृत सूची हुन्छ।
तिनीहरूको सरल अन्त्य छ, तर केवल सुरुचिपूर्ण। यी अफिस कुर्सीहरूको र of्गको संयोजनको अर्थ यो हुन्छ कि हामीसँग बाँकी बाँकीसँग मिलाउन सधैं एक उत्तम हुन्छ कार्यालय फर्नीचर। यस अवस्थामा, तपाईले तिनीहरूलाई बिना पक्राउ पछाडि पाउन सक्नुहुन्छ र बिना पक्राउ पछाडि कपडामा समाप्त गरी सक्नुहुन्छ तपाईंको शरीर फिट हुने विभिन्न उचाइहरू र तपाईंको आवश्यकताहरू। भाइब्रेन्ट रंग, धातु समाप्त ... कुन मनपर्ने तपाईंको मनपर्दछ?
आत्मविश्वास शैली कुर्सि
तिनीहरू यसको नुनको मूल्यको हरेक कार्यालयमा अनुपस्थित हुन सक्दैनन्। सबै भन्दा बढी किनभने तिनीहरू हो आगन्तुकहरु प्राप्त गर्न को लागी नियत। आधुनिकताको रूपमा एकै समयमा बहुमुखी प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता। तिनीहरू साधारण कुर्सीहरू हुन् र अघिल्लोहरू जत्तिकै सटीक छैनन्, यद्यपि, उनीहरूको आफ्नै सुविधा पनि छ जसले ग्राहकहरू उनीहरूको लागि हामीले गरेको प्रस्तावहरू प्रतिक्षा गर्दा वा सुन्दा उनीहरूलाई धेरै सन्तुष्ट महसुस गराउँदछन्। हुनसक्छ यो अफिसको फर्नीचर हो जुन हामी सँधै हेर्दछौं र सबै कामदारहरू र आगन्तुकहरूको लागि सबैभन्दा आवश्यक छ।
बहुउद्देशीय कोठाको लागि कुर्सी
जब यो एक गर्न आउँछ सम्मेलन वा बैठकत्यहाँ उत्तम कुर्सीहरूको शैली पनि छ जुन ती मिनेटहरू धेरै थप सहन योग्य बनाउन। उनीहरूको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि त्यसले हामीलाई सहज बनाउँदछ र हाम्रो ध्यान नदिईकन समय उडेर जान्छ। यस अवस्थामा, साधारण मोडेलहरू प्राय: छनौट गरिन्छन् जसले कम ठाउँ लिन्छ, तर यसले ठूलो आराम प्रदान गर्दछ।
अत्यावश्यक कार्यालय फर्नीचर
हामी हेर्दै छौ, कुर्सिहरू आधारभूत अंशहरू मध्ये एक हुन् जबaबारे सोच्दै कार्यालय वा कार्यस्थल। तर सत्य यो हो कि तिनीहरूसँग सम्बन्धित अफिस फर्निचर पनि हुन सक्छ। यसैले हामी पूर्ण कार्य वातावरण र हाम्रो रुचि भन्दा बढि पूर्ण गर्नेछौं।
डेस्क वा कार्य तालिका
अर्को मुख्य कुरालाई ध्यानमा राख्नु। आदर्श रूपमा, यो चौडा हुनुपर्दछ, दुबै कम्प्युटरहरू राख्ने बारे सोच्दै र लेख्दा हाम्रो ठाँउ पाउन सक्षम हुनुपर्दछ। तसर्थ, हामी बिभिन्न संग विस्तृत र आरामदायक विकल्प खोज्दछौं शेल्फ वा दराजहरू, जसले हामीलाई जहिले पनि सबै चीज व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ।
फाइल तखता वा दराजहरू
हामी भित्तामा झुण्डिएका अलमहरू मात्र होइन, तर स .्केत गर्दछौं भण्डारण फर्नीचर बुककेसको रूपमा, क्याबिनेटहरू वा ड्ररहरू भराउँदै। तिनीहरू सबै कार्यालय फर्निचरको अंश हुन्। अब हामी केवल आवश्यक उपायहरू लिनुपर्दछ र रंग र रचनाहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन ठाउँ र स्वादको साथ उत्तम रूपमा जान्छ।
किनकि के जहिले पनि खोजी रहन्छ, यो हो कार्यालय फर्नीचर र कुर्सी सेट आधारभूत आवश्यकताहरू प्रदान गर्दछ। हामीले हेर्‍यौं, हामी सान्त्वनामा ध्यान दिन्छौं, तर शैली र टोनहरूमा शर्त लगाउँदछ जसले हामीलाई अधिक प्रकाश र ठाउँको वातावरणको साथ छोड्दछ। केहि चीज जुन सँधै कामको परिणामको पक्षमा हुन्छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » कार्यालयहरू » तपाइँको अनुरूप कार्य वातावरणको लागि कार्यालय कुर्सीहरू
Leroy मर्लिन जूता घर भण्डारण मा रैक
मखमल सोफाहरूको लागि रंग विचारहरू